Sajhasabal.com | Homeकालिकोटको हविगतः जहाँ गरिबी, त्यहाँ महामारी
माघ १३, कालिकोट । खाडाचक्र ४ दलित टोलका ३९ वर्षीय माने विश्वकर्माको ७ जनाको परिवार करिब तीन साताअघि गाउँमा फैलिएको भाइरल ज्वरोले थला पर्‍यो । छरछिमेकले एक साता खाना बनाएर खुवाए ।
दलित समुदायको त पानी नलाग्ने पाखो मात्र छ । बजारबाट दाल, चामल, नुन र तेल किनेर लैजान्छन्, तरकारी किनेर खाने चलन कमै छ । बरु चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट बढी उपभोग हुने गर्छ । धेरैजसो पुरुष ज्याला–मजदुरी गरेर कमाएको रकम मदिरामा सिध्याउँछन् ।
यही प्रवृत्तिले महिला हिंसा बढाएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यबारे अज्ञानता, छोराछोरीबीच विभेद, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी प्रथाजस्ता अन्धविश्वास व्याप्त छ गाउँमा । सोही गाउँका ५० वर्षीय नौले विकको ८ जनाको परिवार मोटेलीवाडामा खरको छाप्रोमा बस्छ । ३५ वर्षीया अम्मकला नौलेसँग पोइल आएपछि भर्ताछातीबाट न्याउका लागेर (झडकेलो सन्तानका रूपमा) खाडाचक्र ४ आएका ४ छोरी र २ छोरासहित सबै भाइरल ज्वरोमा परे ।
मृत्यु भएका बालबालिका सबै एउटै टोलका हुन् । खाडाचक्र ४ का मात्र ३६ जना जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । केहीलाई सन्चो भए पनि केही अझै बिरामी छन् ।
तीन सातादेखि खाडाचक्र ४ दलित टोल, वडा नं. २ मेग्र, पोरिपाल्नीसहितको दलित बस्ती, खाडाचक्र ५ को दाहा मोटेला र वडा नं. ६ को गोरालवाडाको दलित बस्ती, सान्नी त्रिवेणी ६ बुडगाउँको दलित टोल, लालु सितलाको दलित टोल, रास्कोट ९ फुकोट, पचालझरना ७ मयकोटलगायतका दलित तथा विपन्न बस्तीमा भाइरल ज्वरोले महामारीको रूप लिए पनि सरोकारवाला नियन्त्रणमा उदासीन रहे ।